बल्ल खुल्यो नागा र सामन्थाको स’ ‘म्ब”न्ध’वि च्छे”द हुनुको मुख्य कारण, प्रमुख कारण यि युवक पो रहेछन् ! – Sunaulo Nepal TV
बल्ल खुल्यो नागा र सामन्थाको स’ ‘म्ब”न्ध’वि च्छे”द हुनुको मुख्य कारण, प्रमुख कारण यि युवक पो रहेछन् !
काठमाडौँ । साउथ फिल्मका चर्चित नायक नागा चैतन्य र नायिका सामन्था रुथ प्रभु अन्तत एकअर्कासँग सँगै नबस्ने भन्दै छु’ट्टी—एका छन् । उनीहरुको सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागेसँगै अनेकन अड्कलबाजीहरु भएका बेला उनीहरुको स’–म्ब—न्धवि’–च्छे–द–को प्रमुख कारण सामन्था पछिल्लो समय फेसन डिजाइनर साथी प्रितम जुकालकरसँगको सम्बन्ध भएको बताइएको छ ।
यो जोडीको डि—–’र्भो—-स हुनुको खास कारण फेसन डिजाइनर साथी प्रितम जुकालकर नै भएको भारतीय मिडियाहरुल्े दाबी गरिरहेका छन् । यसअघि नागाको परिवारले सामन्थाले अभिनयलाई छो’डेर पारिवारिक जीवन बिताउन द—-बा—ब दिइरहेका कारण सामन्थाले डि—’र्भो—-’स—को निर्णय लिएको बताइएको थियो ।
गत सातामात्र उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरु अलग्गिने निर्णय लिएका थिए । सामन्था र नागाको यो निर्णयले सामन्थाका पिता जोसेफ र नागाका पिता तथा अभिनेता नागार्जुनले ‘दुः—खि—–त’ बनेको बताएका छन् ।
यो पनि -‘महानायक’ वि–वा–द टुंग्याउन राजेश हमाल र शोभित बस्नेत बीच भेट
काठमाडौं : निर्देशक शोभित बस्नेतले कयौं अन्तर्वार्तामा राजेश हमाललाई ‘महानायक’ नभइ ‘सुपरस्टार’ भनेका छन् । धेरै सुपरहिट फिल्म दिएकाले यो उपाधिको हकदार भुवन केसी रहेको उनको तर्क हुन्थ्यो । दुई हप्ताअघि आफू निर्दे शित फिल्म ‘डाँडाको बरपीपल’ को गीत रिलिज कार्यक्रममा पनि उनले भुवन केसीलाई ‘नेपाली फिल्म क्षेत्रको एक मात्र असली महानायक’ भनेर सम्बोधन गरे ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरेको व्यक्ति (राजेश हमाल) लाई ‘महानायक’ मान्न नसकिने उनको तर्क थियो । तर, यसपटक उनलाई आफ्नै बोली भारी पर्‍यो । सामाजिक सञ्जालमा दर्शकहरु उनीमाथि गा’–ली ग’–लौ–जमा उत्रिए। दर्शकको ठूलो वर्गले फिल्म ब–हि–स्कार गर्नेसम्मको कुरा उठायो । ‘महानायक’ वि–वा–द–को असर फिल्मको ‘काट्दिम्ला जुँगा’ गीतमाथि पनि पर्‍यो ।
यो वि—-वा—द–ले प्रदर्शनको मुखमा रहेको फिल्मलाई गम्भीर असर गर्ने बुझेपछि उनले गत आइतवार ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा राजेश हमालको तस्विरलाई प्रमुख अतिथी बनाएर आफ्नो बुझाइ गलत रहेको बताउँदै दर्शकसँग माफी नै माग्न भ्याए । अबदेखि राजेश हमाल लाई ‘महानायक’ र भुवन केसीलाई ‘सुपरस्टार’ भन्ने उनले वाचा समेत गरे । अर्थात् उनले फिल्म जोगाउन आ–त्मसमर्पण गरे ।
‘महानायक’ वि—वा—द–ले गर्दा राजेश हमालसँग शोभितको सम्बन्ध चिसिएको थियो।यो वि—वा—-द—लाई टुंग्याउन पत्रकार प्रकाश सुवेदीले हमाल र शोभितबीच भेट गराउन मध्यस्थ कर्ताको भूमिका खेलेका छन्। मंगलवार काठमाडौंको होटल अलफ्टमा छायांकन भएको ‘ग्ल्या मर गफ’ टेलिभिजन शोमा अतिथी भएर पुगेका राजेश हमालसँग पत्रकार सुवेदीले शोभितलाई बोलाएर भेट गराएका हुन् । उनीहरु बीच उक्त होटलमा करीब २ घन्टा कुराकानी भएको थियो ।
Previous ‘ससुरालीलाई प्रत्येक महिना ३३ हजार दिन्थेँ अब झन माग बढाए-थेग्न सकिन’ भन्दै युवकले जिवन त्यागे
Next पारश र हिमानीको छोरीले पहिलोपटक सार्वजनिक गरे यस्तो तस्बिर (भिडियो)